siifsiin_ – Page 16 – siifsiin
Waamicha Barreessitoota Oromoof
Barruulee Siifsiin yeroo gara yerootti qabiyyeewwan ogbarruu Oromoo asoosama gaggabaaboo, walaloowwaan, afoola oromoo, mudannoowwan, baacoo bashannansiisaa barsiisan, seenaa namoota bebbeekamoo addunyaa kan muuxannoo irraa qooddataniifii kanneen biroo qabatee yeroof ji'a lamatti al tokko hawaasa Oromoo biraan ga'aati jira. Kanaafuu kaayyoon keenya barreesitoota jajjabeessuu waan ta'eef, waan barreessitanii harkaa qabdan Siifsiin karaa godhachuun akka lammii keessaniin … Continue reading Waamicha Barreessitoota Oromoof
Geggeessummaan maal fakkaataa?
Geggeessummaa hojii kee keessatti.hawaasa kee keessatti ykn jaarmiyaa kee keessatti yeroo ta'u arguu dandeessaa? Gaggeessummaa hojiin arguuf bu'aawwan sadan kana barbaaduu si barbaachisa. Isaanis: kallattii. Kallattiin maal fakkaataa? Namni kamiyyuu mul'ata yookaan galma kooti kan jedhudha. Namoota waan milkaa'ina hundaa fakkaata jedhanitti waliif galu. Hiriirsuun maal fakkaataa? Nama kamiif iyyuu gahee fiitti gaafatamummaan walii isaanii … Continue reading Geggeessummaan maal fakkaataa?
Seenaa Gotaa Oromoo Garasuu Dhukii Kutaa Lamaffaa
Geggeessitoonni Xaaliyaanii fi baandaan sodaatanii yeroo hedduu araaraaf jaarsa itti ergaa turan. Garasuun gargaarsa uummataa fi onnee waan qabuuf shiraa fi kiyyoo isaanitiin qabamuu hin dandeenye. Roorrisaan biyya abbaa qabu gabroomfate fi baandaan biyyaa isaa saamsisuun alagaa jala kaatu ramaca caalaa isa guba ture. Keesumaa uummanni Itoophiyaa Xaaliyaanotaan Finfinneerratti ajjeefame ijasaa duraa baduu dide. Guyyaa tokkollee osoo miila isaarra rasaasan rukutamee loltoonni harkaa … Continue reading Seenaa Gotaa Oromoo Garasuu Dhukii Kutaa Lamaffaa
Seenaan Akkoo Manooyyee har’as waan hedduu nu barsiisaa!!
Bara durii keessa jaartiin Akkoo Manooyyee jedhamtu takka angoo/taayitaa /aargattee turte. Angoo isii kanaan wonta ajaa’ibaa raawwataa/hojjataa turte. Yeroo angoo irra jirtutti akkoon mannoyyee turte tarkaanfii asii gaditti ibsamaan tartiibaan ummata ishee irratti fudhatte: Jalqaba namoota gabaabaa lafarraa fixaa jettee murtii labsite. Akka yaada akkoo mannoyyeetti namoonni gabaaboon qaroodha. Yeroo adda addaatti yeroo isiin ajaja adda adaa … Continue reading Seenaan Akkoo Manooyyee har’as waan hedduu nu barsiisaa!!
Mootittiin kun saanduuqa ishee akka argattuu gargaaruu dandeessa? Itti dhiyaadhaa! Hibboo Mootittiin kun saanduqa ishee dhabde! Namoonni mi'ooftuuwwan ishee jalaa hin nyaanne dhugaa himu. Isaan warri hatanii nyaatan ammoo soba dubbatu. Wayita gaafataman, naamoonni shan akka armaan gadiitti deebii kennan... Nama 1: 'Nu keessaa namni tokko nyaateera' Nama 2: 'Nu keessaa namonni lama nyaataniiru' Nama … Continue reading Hibboo
Qabiyyeewwan qaama keenyaa keessa
Qaama Keenya keessa qabiyyeewwan kunnen jiraachuu beektu? Oksijiinii /O/ 65% Karboonii /C/ 18% Haydiroojinii /H/ 10% Naytiroojinii /N/ 3% Kalshiyeemii /Ca/ 2% Foosferik /P/ 1% Maddi: Kitaaba … Continue reading Qabiyyeewwan qaama keenyaa keessa
Karaa deemaaf mana namaa Namicha tokkotu karaa deemaa ture. Osoo dhuma akaraa deemuu aduun itti dhiitee jennaan mana guddaa karaa gubbaa jiru tokko akka bulchaanif kadhatee buluuf gore. Warreen abba mana akka bulu heeyyamanif. Innis yeroo mana seenuu haati mana lukku qaltee itoo isaa hojjachaa jirtuu arge. Yeroo hirbanni gahu haati mana karaa deemaa kanaaf … Continue reading Oduu Durii
Parkii Gaarreen Bale kutaa 2